Mesozoic era: wax walboo aad ubaahantahay inaad ogaato | Saadaasha Shabakadda
Markuu arkay wax walba oo isaga la xiriira Precambrian eon, waxaan horay ugu soconaa waqtiga booqashada the Mesozoic. Raacitaanka tilmaamaha ee waqtiga cilmiga dhulka, Mesozoic waa waagii loo yaqaanay da'da dinosaurs. Waxay ka kooban tahay saddex xilli oo loo yaqaan 'Triassic, Jurassic' iyo 'Cretaceous'. Xilligan, dhacdooyin badan ayaa ka dhacay meeraheenna Dunida oo aan si faahfaahsan ugu arki doonno dhammaan qoraalkan.
Ma rabtaa inaad ogaato wax kasta oo ka dhacay Mesozoic? Kaliya waa inaad sii wadataa akhriska.
2 Xamaarato iyo dinosaurs
3 Muddo Triasic ah
4 Muddadii Jurassic
5 Muddada Cretaceous
Mesozoic wuxuu dhacay inta udhaxeysa qiyaastii 245 milyan oo sano wuxuuna socday illaa 65 milyan oo sano ka hor. Xilligan wuxuu socday wadar ahaan qiyaastii 180 milyan oo sano. Intii lagu gudajiray waqtigan, laf-dhabarta ayaa soosaartay, kala-badisay oo guuleysatay dhamaan meelihii Dunida.
Thanks to horumarinta shanta dareen, muujinta cusub ee isbeddelka maaddada ayaa la bilaabay in la abuuro. Tan ayaa ku bilaabmaysa isbeddelka xubnaha sida tallaabo horumarineed oo weyn. Maskaxdu waa xubinta bixisa horumarka ugu badan taariikhda.
Bu'da unugyadu waxay noqotaa isku-duwidda iyo soo-dhowaynta dhammaan macluumaadka. Waxaa loo tixgeliyaa maskaxda unugyada, laakiin waxay bilaabaysaa inay ka hadasho maskaxda kalluunka. Waqtigaan isbeddelada isdaba jooga ah ee amphibians, xamaarato, shimbiraha iyo xayawaanada xayawaanka ah ayaa dhacaya taas oo maskaxda ay horumarinayso oo ay tababarayso inay maamusho tiro badan oo macluumaad ah.
Xilligan qaaradaha iyo jasiiradaha lagu ururiyey Pangea waxay bilaabayaan inay si tartiib tartiib ah u qaataan muuqaalkooda hadda. Dhaqdhaqaaqyo waaweyn oo orogenic ah ma dhacaan jawiguna guud ahaan waa xasilloon yahay, kulul yahay oo qoyan. Tani waa sababta ay xamaarato u gaareen horumar aan caadi aheyn ilaa heer dinosaurs. Cabirka xayawaanadan ayaa ahaa mid aad u weyn, waxaana ugu wacan badnaantooda badan, Mesozoic waxaa sidoo kale loo yaqaan Da'da Xamaarato.
Xamaarato iyo dinosaurs
Xamaarato qaar baa bartay duulista. Waa in la sheegaa in, sidii waayihii iyo xilliyadii oo dhan, ay u wada baaba'een kooxo badan oo xayawaan ah sida trilobites, graptolites iyo kalluunka gaashaaman.
Dhinaca kale, flora iyo fauna waa la cusbooneysiiyey. Jimicsiga jimicsiga ayaa u muuqday (dhirta xididada xididada sameysa ee abuurka laakiin ubax la’aanta). Dhirtaasi waxay barakicisay fernskii. Dhamaadka Da'da, dhirta loo yaqaan angiosperms ayaa soo baxday. Iyagu waa dhirta xididdada xididdada ugu beddelka leh ugxansidaha iyo miraha ku lifaaqan. Intaas waxaa sii dheer, waxay leeyihiin ubaxyo iyo miro.
Boodboodkan weyn ee isbeddelka ayaa saameyn weyn ku yeeshay nolosha xayawaanka, maadaama dhirta ay yihiin isha ugu weyn ee cunnada iyo quudinta in badan oo iyaga ka mid ah. angiosperms sidoo kale waa arrimo qaboojiyaha u ah aadanaha, maaddaama inta badan dalagyada adduunka ay ka yimaadaan iyaga.
Kuwa ugu weyn xamaarato ama sidoo kale loo yaqaan dinosaurs ayaa xukumay dhulka iyo hawada malaayiin sano. Waxay ahaayeen xayawaanka ugu horumarsan. Dhamaadkeedii wuxuu la yimid dabargoyntii ugu dambeysay ee Mesozoic. Intii lagu guda jiray baabi'intan ballaaran, kooxihii waaweynaa ee isweydaarsiga ayaa la waayey.
Sidii aan horay u soo sheegnay, xilligii Mesozoic wuxuu u qaybsan yahay saddex xilli: Triassic, Jurassic, iyo Cretaceous. Aan aragno mid kasta oo iyaga ka mid ah si faahfaahsan.
Muddo Triasic ah
Meeshii qaadatay ku dhowaad 245 ilaa 213 milyan oo sano. Muddadan ayaa ammonoids-kii ugu horreeyay dhashay. Diinosaarradii ayaa muuqanayay oo kaladuwanaa. Qiyaastii 230 milyan oo sano ka hor, miskaha reptilian-ku waxay awood u yeesheen inay la qabsadaan tartanka ugu dhakhsaha badan. Intaa waxaa sii dheer, qiyaastii 205 milyan oo sano ka hor xayawaankii ugu horreeyay (duulaya xamaarato) ayaa soo ifbaxay.
Triassic wuxuu astaan ​​u yahay muuqaalka naasleydii ugu horreysay ee runta ah iyo shimbiraha ugu horreeya. Shimbiraha ayaa ka kacay xayawaanno dugaag, iftiin, laba-lugoodle ah. Diinosaarradu waxay awoodeen inay hawada bilaabaan oo ay qabsadaan jawiga hawada. Tan awgeed, hore waxay si tartiib tartiib ah ugu beddeleen baalal duulimaad oo ciribtirka dambe ayaa khafiifay oo ka fudud.
Dhinaca kale, jirkiisa waxaa lagu daboolay baalal difaaci kara oo aan biyuhu istaagi karin si tartiib tartiib ahna wuu u yaraaday oo u fududaaday. Noolaha oo dhami wuxuu u habeeyey duulimaadyo dheereeya ama ka yar.
Oo xagga dhulka, geedaha ugu badan waxay ahaayeen cagaar, inta badan cinjirrada iyo ginkgos. Sidii aan horey u soo sheegnay, xilligii Triassic-ka, Pangea waxaa loo kala saaray laba qaaradood oo waawayn oo la kala yiraahdo Laurasia iyo Gondwana.
Muddadii Jurassic waxay dhacday qiyaastii 213 ilaa 144 milyan oo sano. Sida aad ku arki karto filimada, tani waxay ahayd xilligii dahabiga ahaa ee dinosaurs-ka. Tani waa sababta oo ah cimilada ayaa ah mid aad u kulul oo qoyan waxayna doorbideysaa koritaankeeda. Kordhinta dhirta aadka u xiisaha badan iyo baahidooda ayaa sidoo kale loo fadilay.
Markii qaaraduhu kala go'een, badaha weynaadeen iskuna dubbaridayeen, halka aagagga gacmeed iyo diiran ee biyaha badda ku faafeen Yurub iyo dadyowga kale ee qaaradda. Dhamaadka Jurassic, baddani waxay bilaabeen inay qallalaan, iyagoo ka tagay kayd badan oo dhagax nuurad ah oo ka yimid reef reral iyo badda dhexdeeda.
Qeybta dhulka waxaa ku xoog badnaa dinosaroor, halka tirada xayawaanada xayawaanku ay koraan sida ichthyosaurs iyo plesiosaurs. Sidii aan horey u soo sheegnay, dinosaurku wuxuu awooday inuu ku faafo dhamaan sedexda dariiqo ee suurtogalka ah. Naasleydu way sii yaraayeen muddadan oo dhan. Dhuxulada ka kooban reef-yada waxay ku koraan biyaha gacmeed ee xeebta.
Cretaceous wuxuu dhacay qiyaastii 145 ilaa 65 milyan oo sano. Waa muddada tilmaamaysa dhammaadka Mesozoic iyo bilowga Cenozoic. Muddadan waxaa jira dabargo baaxad weyn oo nooleyaal ah kuwaas oo diinosaarradu ku baaba'aan iyo 75% dhammaan qallalan. Isbadal cusub ayaa bilaabmaya kuna saleysan dhirta ubaxyada, naasleyda iyo shimbiraha.
Saynisyahannadu waxay ku fikiraan sababaha keena baabi'inta. Aragtida ugu ballaadhan ayaa ah in isbeddelada cimilada, jawiga iyo cuf isjiidadka ka dhacayay xilligan, lagu daray dhicitaankii meteorite aad u weyn oo ku yaal jasiiradda Yucatan. Meteorite-kan ayaa si weyn u bedelay xaaladaha nololeed ee Dunida wuxuuna sababay baabi'inta sababtoo ah la qabsi la'aanta xaaladaha cusub. Sababtaas awgeed, khadadka isbeddelka ee Dunida wuxuu diiradda saaray kala-duwanaanta shimbiraha iyo naasleyda.
Macluumaadkan waxaad awoodi doontaa inaad waxbadan ka ogaato Mesozoic.
Wadada buuxda ee maqaalka: Saadaasha Shabakadda » Saadaasha hawada » Ciencia » Mesozoic era: wax kasta oo aad u baahan tahay inaad ogaato
Aad iyo aad u xiiso badan macluumaadka faahfaahsan oo cad ee xilli kasta iyo xilli kasta, mahadsanid, aad baad u mahadsan tahay!
Jawaab Mauro Neumann